Bit By Bit - Mifehy - 6.2.3 encore
Mpikaroka nahatonga ny olona ny solosaina mba mangingina manandrana mba hitsidika tranonkala izay nihevitra ho voasakana ny famoretana governemanta.
Tamin'ny Martsa 2014, mpikaroka namoaka encore, ny rafitra mba hanome tena-ny fotoana sy ny fandrefesana ny aterineto maneran-sivana. Mba hahatakarana ny fomba niasa, dia aoka ny mieritreritra izany ao anatin'ny pejy web manokana (raha tsy manana ny iray, dia afaka an-tsaina ny namanao). Ny fomba iray mba hieritreritra momba ny pejy web dia toy ny solosaina fandaharana voasoratra ao amin'ny HTML teny. Raha misy mpampiasa nitsidika ny tranonkala, ny solosaina fandaharana alaina ny HTML ary avy eo dia mahatonga izany teo an-efijery. Noho izany, ny pejy web dia fandaharana izay afaka hitarika ny olona hafa ny solosaina mba hanaraka karazana ny toromarika sasany. Noho izany, ny mpikaroka, Sam Burnett sy Nick Feamster, izay tao Georgia Tech, Nampirisika tranonkala tompon'ny mba hametraka kely snippit fehezan-dalàna an-vohikala:
Raha mitsidika ny pejy web amin'ny Fehezan-dalàna ity snippit ao izany, eto no hitranga. Raha ny tranonkala navigateur dia rending ny pejy web, ny fehezan-dalàna snippit dia hahatonga ny solosaina mba hiezaka hifandray ny tranonkala izay fanaraha-maso ny mpikaroka ireo. Ohatra, mety ho ny vohikala voarara ny antoko politika na vondrona ara-pivavahana enjehina. Avy eo, ny solosaina dia tatitra ny mpikaroka momba ny na dia afaka hifandray ny mety voasakana tranonkala (Sary 6.2). Koa, izany rehetra izany dia ho tsy hita maso ho anao raha tsy amin'ny teny anglisy ny HTML loharano rakitra ny pejy web. Tsy hita maso toy izany antoko fahatelo-pejy fangatahana dia marina tena mahazatra amin'ny aterineto (Narayanan and Zevenbergen 2015) , nefa mahalana vao tafiditra amin'izany mazava ezaka mba handrefy ny sivana.
Sary 6.2: Schematic ny fikarohana nanaovana ny encore. Ny niandohan'ny tranonkala mandefa anao ny pejy web HTML voasoratra ao amin'ny fehezan-dalàna kely Fizaha Snippet nandinika lalina ao aminy (dingana 1). Ny solosaina mahatonga ny pejy web, izay mahatonga ny asa fandrefesana (dingana 2). Ny solosaina miezaka ny mahazo ny fandrefesana lasibatra, izay mety ho ny vohikala voarara ny antoko politika (dingana 3). A Sivana, toy ny governemanta, dia mety dia manakana ny fidirana ho any amin'ny fandrefesana tanjona (dingana 4). Farany, ny solosaina dia mitatitra ny vokatry ny fangatahana io ny mpikaroka (tsy hita eo amin'ny sary). Figure avy Burnett and Feamster (2015) .
Izany fomba tena tsara tarehy manana fananana noho ny fandrefesana ara-teknika ny sivana. Raha ampy ny vohikala hametraka snippit Fehezan-dalàna ity, dia ny mpikaroka dia afaka manana tena andro, maneran-ambaratonga fepetra izay vohikala ireo sivana izay firenena. Talohan'ny fandefasana ny tetikasa, ny mpikaroka niresaka tamin'i ny IRB tao Georgia Tech, sy ny IRB nivily mba hijery ny tetikasa satria tsy "olombelona olom-peheziny fikarohana" eo ambanin'ny iombonana Fitsipika (ny Common Fitsipika no napetraka ny fitsipika mifehy tena federally-novatsian'ny fikarohana any Etazonia, fa mila fanazavana fanampiny, dia jereo ny fanazavana fanampiny tantara eo amin'ny faran'ny toko ity).
Tsy ela taorian'ny encore natomboka, anefa, ny mpikaroka dia nifandray tamin'ny Ben Zevenbergen, dia nahazo diplaoma mpianatra, izay nanangana fanontaniana momba ny fitsipi-pitondrantena ao amin'ny tetikasa. Indrindra indrindra, nisy mampanahy ny olona any amin'ny firenena sasany mety ho hita ho sorona, raha ny solosaina niezaka nitsidika mora sasany vohikala, ary ireo olona izay ho tratran'ny loza tsy nety handray anjara amin'ny fianarana. Nalaina avy ireo resaka, ny encore ekipa farany ny tetikasa mba ihany no miezaka mba handrefesana ny sivana amin'ny Facebook, Twitter, ary ny YouTube noho ny fahatelo-antoko miezaka mba hahazoana izany toerana Fahita nandritra ny ara-dalàna tranonkala Browsing (ohatra, isaky ny pejy web amin'ny Facebook Like Button mahatonga ny fahatelo-antoko fangatahana ny Facebook).
Rehefa avy fanangonana tahirin-kevitra amin'ny fampiasana ity farany famolavolana, ny taratasy mamaritra ny fomba fiasa sy ny vokatra sasany dia nanaiky ny SIGCOMM, iray solosaina siansa malaza fihaonambe. Ny fandaharana ara-teknika komity nankasitraka ny fanomezana ny taratasy, fa naneho ny ahiahiny momba ny tsy fisian'ny fahalalana ampy faneken'ny avy amin'ny mpandray anjara. Amin'ny farany, ny fandaharana nanapa-kevitra ny hamoaka komity ny taratasy, fa miaraka amin'ny fanaovan-tsonia fanambarana maneho etika ahiahy (Burnett and Feamster 2015) . Toy izany ny fanaovan-tsonia fanambarana tsy mbola nampiasaina talohan'ny amin'ny SIGCOMM, ary ity raharaha ity dia niteraka ny adihevitra fanampiny amin'ny alalan'ny solosaina mpahay siansa momba ny natiora ny etika amin'ny fikarohana (Narayanan and Zevenbergen 2015) .